Ny fizahantany any Hawaii dia mbola simba tanteraka amin'ny valanaretina COVID-19 manerantany
Home » Hawaii Travel News » Ny fizahantany any Hawaii dia mbola simba tanteraka amin'ny valanaretina COVID-19 manerantany
Ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika any Hawaii tamin'ny Febroary 2021 dia $ 385.3 tapitrisa - nidina 73.6%
Nisy mpitsidika 90,776 2021 tany Hawaii tamin'ny andro iray tamin'ny volana febroary XNUMX
Misy mpitsidika 250,052 2020 any Hawaii isan'andro amin'ny febroary XNUMX
Tamin'ny volana febroary, ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana sy ny dia lavitra dia afaka nanalavitra ny fanjakàn-tenan'ny fanjakana 10 andro.
Ny indostrian'ny mpitsidika an'i Hawaii dia mbola voan'ny fihenan'ny COVID-19 manerantany. Raha ny statistika savaranonando navoakan'ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii (HTA), ny salanisan'ny fanisam-bahoaka isan'andro dia nampiseho fa 90,776 2021 ny mpitsidika tao Hawaii tamin'ny andro iray tamin'ny volana febla 250,052, raha oharina amin'ireo mpitsidika 2020 XNUMX isan'andro tamin'ny febroary XNUMX.
Nandritra ny volana febroary, ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana sy ny dia lavitra dia afaka nanalavitra ny quarantine 10 andro tsy maintsy nataon'ny fanjakana tamin'ny valin'ny fitsapana COVID-19 NAAT ratsy avy amin'ny mpiara-miasa fitiliana azo antoka tamin'ny alàlan'ny programa Safe Travels an'ny fanjakana. Ny mpizahatany trans-Pasifika rehetra nandray anjara tamin'ny programa fanandramana mialoha ny dia dia notakiana ny hanana valin'ny fitsapana ratsy alohan'ny fiaingany ho any Hawaii. Ny distrikan'i Kauai dia nanohy nampiato vonjimaika ny fandraisany anjara amin'ny programa Safe Travels ho an'ireo mpandeha pasifika, fa ireo mpitsangatsangana eo amin'ny nosy izay efa tao anatin'ny telo andro mahery tany Hawaii dia afaka nanalavitra ilay quarantine tamin'ny valim-panadinana marim-pototra. Ireo mpivahiny Trans-Pasifika mankany Kauai dia nomena safidy handray anjara amin'ny programa fitsapana mialoha sy aorian'ny fitsangatsanganana amin'ny fananana "bubble resort" ho fomba iray hanafohezana ny fotoanan'izy ireo ao amin'ny quarantine. Ny distrikan'i Hawaii sy Maui koa dia nanana karokantinika ampahany tamin'ny febroary. Ho fanampin'izay, ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina (CDC) dia nanohy nampihatra ny “Order Condition Sailing Order” amin'ireo sambo fitsangantsanganana rehetra.
Mpitsidika 235,283 2021 no tonga tany Hawaii tamin'ny alàlan'ny serivisy tamin'ny volana Febroary 828,056, raha oharina amin'ireo mpitsidika 164,861 tonga tamin'ny sambo fiaramanidina sy sambo iray herintaona lasa izay. Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia avy tany Etazonia Andrefana (53.6, -63,899%) sy Etazonia Atsinanana (67.1, -695%). Ary mpitsidika 99.4 no tonga avy tany Japon (-493%) ary mpitsidika 99.2 no avy tany Canada (-5,336%). Nisy mpitsidika 93.2 avy amin'ny Markets Iraisam-pirenena hafa (-XNUMX%). Ny maro amin'ireo mpitsidika ireo dia avy any Guam, ary mpitsidika vitsivitsy vitsivitsy dia avy any Azia hafa, Eropa, Amerika Latina, Oceania, Filipina ary nosy Pasifika.
Raha ny fanisam-bahoaka isan'andro dia 60,249 ny mpitsidika tonga tany Hawaii tamin'ny andro iray tamin'ny volana febroary avy any US West (-42.7%), 26,996 ny mpitsidika avy any Etazonia Atsinanana (-59.0%), 430 ny mpitsidika avy any Japon (-98.2%), 488 ny mpitsidika avy any Canada (-98.2%), ary ny mpitsidika 2,613 89.9 avy amin'ny tsena iraisam-pirenena hafa (-2020%), nihena be raha oharina tamin'ny febroary XNUMX.
Ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika tamin'ny Febroary 2021 dia $ 385.3 tapitrisa (-73.6%). Izany dia naneho ny $ 13.8 tapitrisa isan'andro, raha oharina amin'ny $ 50.3 tapitrisa isan'andro tamin'ny febroary 2020. Nandany $ 9.4 tapitrisa isan'andro ireo mpitsidika amerikana (-52.2%). Ny mpitsidika amerikana atsinanana dia nandany $ 4.1 tapitrisa isan'andro (-71.3%). Ny mpitsidika avy any Japon dia nandany $ 86.1 arivo isan'andro (-98.5%). Ny mpitsidika avy any Kanada dia nandany $ 80.6 arivo isan'andro (-98.4%). Ny fandaniana data ho an'ireo mpitsidika avy amin'ny tsena hafa dia tsy nisy.
Nisy sidina trans2,556 Pasifika 532,220 sy seza misy rivotra 2021 izay nanompo ny Nosy Hawaii tamin'ny volana feb 91. Izany dia nahatratra 19,008 ny sidina ary seza an'habakabaka 172 38,186 isan'andro, izay ambany lavitra noho ny sidina 2020 sy seza XNUMX isan'andro amin'ny febroary XNUMX. Tsy nisy seza voalahatra avy any Oceania, ary somary vitsy kokoa ny toerana voalahatra avy any Azia hafa, Japon, Kanada, Etazonia Atsinanana, Etazonia Andrefana, ary firenena hafa raha oharina tamin'ny herintaona lasa izay.
Seychelles fizahan-tany dia namoaka ny drafitra fanarenana ny fizahan-tany 2021
Ny fanidiana ny masoivohon'ny fizahan-tany amin'ny fivarotana dia manamarika ny fiovan'ny fivarotana antsinjarany